18 Mgbe ihe ndị a gasịrị, ọ hapụrụ Atens wee bịa Kọrịnt. 2 O wee hụ otu onye Juu aha ya bụ Akwịla,+ bụ́ onye Pọntọs onye si Ịtali+ bịa n’oge na-adịbeghị anya, nakwa Prisila nwunye ya, n’ihi na Klọdiọs+ nyere ndị Juu niile iwu ka ha pụọ na Rom. Ya mere, ọ gakwuuru ha, 3 ebe ya na ha nwere otu ụdị aka ọrụ, o binyeere ha n’ebe obibi ha, ha rụkọkwara ọrụ,+ n’ihi na aka ọrụ ha bụ ịkpa ákwà ụlọikwuu. 4 Otú ọ dị, ọ na-ekwu okwu n’ụlọ nzukọ+ kwa ụbọchị izu ike, na-emekwa ka ndị Juu na ndị Grik kwere. 5 Ma mgbe Saịlas+ na Timoti+ si Masedonia gbadata, Pọl malitere ikwusasi okwu Chineke ike, na-agbara ndị Juu àmà iji gosi na Jizọs bụ Kraịst.+ 6 Ma mgbe ha nọ na-eguzogide ma na-ekwujọ ya,+ o fechara uwe+ ya wee sị ha: “Ka ọbara+ unu dị unu n’isi. Aka m dị ọcha.+ Site ugbu a gaa n’ihu, m ga-ejekwuru ndị mba ọzọ.”+ 7 Ya mere, o si n’ebe ahụ pụọ ma banye n’ụlọ otu nwoke aha ya bụ Tishiọs Jọstọs, onye na-efe Chineke, onye ụlọ ya dị n’akụkụ ụlọ nzukọ. 8 Ma Krispọs,+ onyeisi oche nke ụlọ nzukọ ghọrọ onye kwere ekwe n’Onyenwe anyị, otú a kwa ka ọ dị ezinụlọ ya dum. Ọtụtụ n’ime ndị Kọrịnt bụ́ ndị nụrụ ya malitere ikwere nakwa ịbụ ndị e mere baptizim. 9 N’abalị, Onyenwe anyị gwara Pọl+ n’ọhụụ, sị: “Atụla egwu, kama na-ekwu okwu, agbachikwala nkịtị, 10 n’ihi na anọnyeere m gị,+ ọ dịghịkwa onye ga-eme gị ihe iji merụọ gị ahụ́; n’ihi na enwere m ọtụtụ mmadụ n’obodo a.” 11 N’ihi ya, ọ nọgidere n’ebe ahụ ruo otu afọ na ọnwa isii, na-ezi okwu Chineke n’etiti ha. 12 N’oge Galio bụ onye na-achị+ ógbè Akeya, ndị Juu ji otu obi bilie megide Pọl ma duru ya gaa n’ihu oche ikpe,+ 13 sị: “Nwoke a na-akụziri+ ndị mmadụ ka ha na-efe Chineke n’ụzọ megidere iwu.” 14 Ma mgbe Pọl chọrọ ikwu okwu, Galio gwara ndị Juu, sị: “N’ezie, unu ndị Juu, a sị na ọ bụ mmejọ ma ọ bụ omume arụrụala ọjọọ, m gaara enwe ihe mere m ga-eji jiri ndidi gee unu ntị. 15 Ma ọ bụrụ na ọ bụ arụmụka ndị metụtara okwu na aha+ na iwu+ unu, unu onwe unu hụnụ banyere ya. Achọghị m ịbụ onyeikpe nke ihe ndị a.” 16 O wee chụpụ ha n’ihu oche ikpe ahụ. 17 Ya mere, ha niile jidere Sọstenis+ onyeisi oche nke ụlọ nzukọ ma malite iti ya ihe n’ihu oche ikpe ahụ. Ma Galio atụpụghị ọnụ n’ihe a niile. 18 Otú ọ dị, mgbe Pọl nọkwuru ọtụtụ ụbọchị, ebe ọ bụ na ọ kpadara ntutu isi+ ya na Senkrea,+ n’ihi na o nwere nkwa o kwere, ọ sịrị ụmụnna ahụ ka e mesịa ma soro ụgbọ mmiri gawa Siria, Prisila na Akwịla sokwa ya. 19 Ha wee bịarute Efesọs, ọ hapụkwara ha n’ebe ahụ; ma ya onwe ya banyere n’ụlọ nzukọ+ wee soro ndị Juu nwee mkparita ụka. 20 N’agbanyeghị na ha nọ na-arịọ ya ka ọ nọtụkwuo, o kweghị, 21 kama ọ sịrị ha ka e mesịa,+ sịkwa ha: “M ga-abịakwute unu ọzọ, ma ọ bụrụ uche Jehova.”+ O wee banye ụgbọ mmiri n’Efesọs 22 gbadata Sesaria. O wee gbagoo kelee ọgbakọ ahụ ma gbadaa Antiọk. 23 Mgbe ọ nọtụrụ ebe ahụ, o biliri wee gaa ebe dị iche iche n’obodo Galeshia+ na Frijia,+ na-eme ka ndị niile na-eso ụzọ Jizọs dị ike.+ 24 Ma otu onye Juu aha ya bụ Apọlọs,+ onye ọkà okwu, onye Alegzandria, bịara n’Efesọs; ọ makwaara Akwụkwọ Nsọ nke ọma.+ 25 E jiriwo ọnụ kụziere nwoke a ihe n’ụzọ Jehova, ebe ọ na-anụ ọkụ na mmụọ,+ ọ malitekwara na-ekwu okwu ma na-ezi ihe ndị metụtara Jizọs n’ụzọ ziri ezi, ma ọ bụ naanị banyere baptizim+ Jọn ka ọ maara. 26 Nwoke a malitekwara ikwu okwu n’atụghị egwu n’ụlọ nzukọ. Mgbe Prisila na Akwịla+ nụrụ ihe ọ na-ekwu, ha kpọbatara ya n’etiti onwe ha ma kọwaara ya ụzọ Chineke n’ụzọ ziri ezi karị. 27 Ebe ọ bụkwa na ọ nọ na-achọ ịgafe banye Akeya, ụmụnna degaara ndị ahụ na-eso ụzọ akwụkwọ, gbaa ha ume ka ha jiri obiọma nabata ya. Ya mere, mgbe o rutere n’ebe ahụ, o nyeere+ ndị kwere ekwe n’ihi obiọma Chineke nke na-erughịrị mmadụ aka nke ukwuu;+ 28 n’ihi na o kwusiri okwu ike, gosi nke ọma n’ihu ọha na ihe ndị Juu na-ekwu ezighị ezi, ebe o si n’Akwụkwọ Nsọ+ gosi na Jizọs bụ Kraịst.+